पानी पार्कबाट जरागोजामा पैदल यात्रा | यात्रा समाचार
धेरै जसो निर्माणहरू विशेष रूपमा प्रदर्शन वा अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूको लागि निर्माण गरिन्छन् र सदाको लागि बाँकी हुन्छन्। यो कुरा हो पानी पार्क त्यो निर्माण गरिएको थियो एक्सपो जारागोजा २०० 2008।
तपाईलाई याद छ? आज पार्कको नामकरण गरिएको छ लुइस बुएल पानी पार्क र यो एक सुन्दर पैदल यात्रामा परिणत भएको छ जुन शहरले यसका नागरिकहरू र तिनका आगन्तुकहरूलाई प्रदान गर्दछ। यसको बारेमा थोरै सिकौं।
1 एक्सपो जारागोजा २०० 2008
2 लुइस बुएल पानी पार्क
एक्सपो जारागोजा २०० 2008
जुन १ 14 देखि सेप्टेम्बर १,, २०० From सम्म यस स्पेनी शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो। को प्रेरित यसको पानी र दिगो विकास थियो, त्यसैले एक्सपो भवनको स्थान थियो Meandro डी रनिलास को किनारों, एक लुप जुन Ebro नदी लिन्छ जब यो शहर भएर जान्छ।
केही सय भन्दा बढी देशहरू, सयौं गैर-सरकारी संस्थाहरू र थुप्रै स्वायत्त समुदायहरूले यस प्रदर्शनीमा भाग लिए। ग्रीसका ट्रीस्टे वा थेसलोनिकी जस्ता अन्य उम्मेदवार शहरहरूबीच कसरी विजयी हुने भनेर स्पेनी शहरलाई थाँहा थियो। त्यहाँ थियो लगभग छ लाख आगन्तुकहरु र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो जारागोजा साइटहरूको द्विशताब्दी (नेपोलियनको आक्रमणको विरुद्ध) र १ 1908 ०XNUMX को हिस्पानो-फ्रान्सेली प्रदर्शनीको शताब्दीसंग मिलेर।
त्यसोभए, हामीले माथि भनेझैं रानिलासको मेन्डर एब्रोको घुमाव हो र ACTUR को बायाँ तटमा छ - रे फर्नान्डो छिमेक। यो एक फराकिलो छ १ hect० हेक्टर स्पेस त्यो परम्परागत रूपमा एक बगैचा र ग्रोभको रूपमा कार्य गर्दछ र यसको लागि महत्त्वपूर्ण छ जनावरको जीवन यो घर छ।
एक्सपोको अनुरूप, तीनवटा पुलहरू नदीको दुबै छेउमा, पलासियो डे क Cong्ग्रेसोस र सुन्दर तोरे डेल अगुआलाई जोड्दै बनेका थिए जुन आज भवनहरू मध्ये एक हो आकाशगंगा Zaragoza को।
लुइस बुएल पानी पार्क
पार्क नै कूल ओगटेको छ Hect hect हेक्टर र यदि तपाईं अन्तबाट अन्तमा जानुहुन्छ भने तपाईं दुई किलोमिटर हिड्नुहुनेछ। एक्सपो अघि यो महानगर पानी पार्क को रूप मा परिचित थियो। यो Iñaki Alday, क्रिस्टीन Dalnoki र मार्गारीता जोभर द्वारा डिजाइन गरिएको थियो।
यो बस बाट पुग्न सकिन्छ, लाइन Ci1 र Ci2 त्यहाँ रोकिन्छ, र यदि कार द्वारा छैन भने त्यहाँ एक हजार भन्दा बढी कार को लागी नि: शुल्क पार्किंग छ। पार्क अवस्थित छ प्लाजा डेल पिलरबाट २ 25 मिनेट मात्र पैदल यात्रा, वा Ave Delicias स्टेशन बाट दस मिनेट। यदि तपाईं ट्रामलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर एडोल्फो अज़्नार स्टपबाट तपाईंले अलिक हिडाउनुपर्नेछ।
यद्यपि पार्क नगरपालिकाको हो व्यवस्थापन सार्वजनिक हो - निजी किनकि त्यहाँ निजी क्षेत्रको छुटमा धेरै खाली ठाउँहरू छन्। यसैले, त्यहाँ एक छ पर्यटक रेल, un मल्टिडेन्चर पार्क, बाइक र डु boats्गा भाँडामा छन्, त्यहाँ छन् नदी तटहरू त्यो बालुवा छ, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू, बच्चाहरू थिएटर, लघु गोल्फ, एक स्पा, जिम, pad प्याडल फुटबल कोर्ट, एक राम्रो बनस्पति बगैचा, एक पिकनिक स्पट, गर्न ट्रेल्स चल्दै ...
उत्तरार्द्धको सम्बन्धमा, त्यहाँ दुई चालु सर्किटहरू छन्: एक मध्ये kilometers किलोमिटर र अर्को १०। तिनीहरूलाई चिन्ह लगाइन्छ र अनुमोदित गरिन्छ। दुबै मार्गहरू डामर र फोहरलाई मिल्दछन् र एब्रो नदीको किनारमा र एक्सपोको वरिपरिको छेउछाउमा पत्ता लगाइन्छन्, जसले तिनीहरूलाई यात्रा गर्छन् उनीहरू पार्कमा राम्रो देख्न सक्नेछन् र यसले के प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ नदी एक्वेरियम जुन सबै बर्ष खुला छ। यो एक्सपो क्षेत्रमा छ र प्रवेश4XNUMX यूरो। को लेजर पार्क यो पनि एक धेरै राम्रो विचार हो किनकि यो सबै बर्ष खुला छ र प्रवेश खेल प्रति €6बाट।
अरूलाई छुट क्षेत्र सबै बर्ष खुला हुँदैन: उदाहरण को लागी, बच्चाहरु को लागी मिनी गोल्फ कि मार्च बाट अक्टूबर सम्म मात्र खुला छ। यही समुद्र तटहरू जुन मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म खुल्छन् वा अरबोलिमा थिएटर जुन in देखि6यूरोको टिकटको लागि मौसममा खुल्छ।
यदि तपाईं बच्चाहरूसँग जानुहुन्छ भने, यसबाट हिंड्नु उत्तम हुन्छ खेल मैदान जुन पार्कको दक्षिणमा पसेओ डेल बोटैनिकोमा रहेको छ। यसको लगभग तीन हजार वर्ग मीटर छ र कोलम्पियो डी ओरो पुरस्कारको रूपमा हो सबै स्पेनमा सबै भन्दा राम्रो बच्चाहरूको क्षेत्र। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
बच्चाहरूको लागि यस पार्कमा, चार र बाह्र वर्षका बीच सय भन्दा बढी बच्चाहरू एकसाथ खेल्न सक्छन्। त्यहाँ चार भन्दा बढी उचाईको दुई स्लाइडहरू बीच एक करीव २० विभिन्न खेलहरू छन्, एक फुटबल मैदान, स्विंगहरू, चढ्नको लागि एक पिरामिड, सॉव्स, हपस्कच, र यस्तै। सावधान हुनुहोस्, पानी पार्कमा यो केवल बच्चाहरूको खाली ठाउँ मात्र होइन, त्यहाँ अरूहरू छन् र जम्मा सात छन्, खेल फाउन्टेन र खेल मैदानको बीचमा, त्यसैले तपाईंले छनौट गर्नुपर्नेछ।
वाटर पार्कमा प्रवेशद्वार निःशुल्क र निःशुल्क छ , त्यहाँ कुनै लाकर, ढोका वा ढोकाहरू छन्, त्यस्तै सधैं खुला छ। विचार यो छ कि Zaragoza का परिवारहरु संग र यो विशाल हरियो ठाउँ को मजा छ। केही आगन्तुकहरु गुनासो गर्छन् कि गर्मी मा धेरै छाया हुँदैन तर सत्य यो हो कि बर्षहरुमा रूखहरु बढ्नेछन् र पानीका साथै बतखहरु र अन्य जनावरहरु रूखहरु लाई अधिक चन्दवा दिइन्छ र अधिक छाया प्रदान गर्दछ।
जरागोजा शहर, नगरपालिका र क्षेत्र र उही नामको प्रान्तको राजधानी हो, अर्गोनको स्वायत्त समुदाय भित्र। यो देशको पाँचौं सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको शहर हो र म्याड्रिडबाट करिब २ 275 किलोमिटर, एक सीधा रेखामा, तर road१ about किलोमिटर सडकबाट। यदि तपाईं कारबाट जानुहुन्छ, यो करीव तीन घण्टा र केहि बेर हुन्छ, तर तपाईं AVE लिन सक्नुहुनेछ र तपाईं एक घण्टा १ minutes मिनेटमा, द्रुत एक, वा एक घण्टा 317 19 मिनेटमा ढिलो संस्करणमा आइपुग्नुहुनेछ।
AVE सँग तीन कोटीहरू छन्, पर्यटक, अधिमान्य वा क्लब र यसैले त्यहाँ विभिन्न दरहरू छन्। त्यहाँ एक प्रोमो टिकट, एक लचिलो टिकट, परिवारहरूको लागि एक टिकट र दस यात्राको लागि मान्य BonoAVE छ। यदि तपाईं AVE मा खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईं क्षेत्रीय ट्रेन लिन सक्नुहुन्छ तर म तपाईंलाई पहिले नै चेतावनी दिन्छु कि साढे चार घण्टा लाग्छ। यो सोमवार देखि आइतवार देखि सञ्चालन गर्दछ र चमार्टन स्टेशनहरु डेलिसियसको साथ जोड्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » पानी पार्कबाट जरागोजामा पैदल यात्रा